Sirivhari Searcher: Ack Imwe nzira yeKodhi Kutsvaga Chishandiso | Linux Vakapindwa muropa
SilverSearcher chishandiso chakanakisa chekuraira mutsara kodhi yekutsvaga. Iri muchinjika-chikuva, chiri chakanaka kana iwe ukashanda nemaverengeka anoshanda masystem. Iyo zvakare yakavhurwa sosi uye zvachose yemahara. Uye zvakare, inogovera huwandu hwehunhu hunoshanda neiyo grep yakajeka zvinyorwa zvekutsvaga mabasa.
Musiyano mukuru pakati pematurusi ese ari maviri ndeyekuti Silver Searcher inopa zvirinani kushanda, pamwe nekugona kuve neakakosha algorithm yekuregeredza mamwe mafaera kuburikidza nemaitiro. Chinhu chinogona kuve chakanakira programmers kana vanoshuvira vanogadzira, uye kunyangwe vashandisi veLinux vanopedza yakawanda yenguva yavo vachishanda pamberi pekodhi yekodhi mune chinyorwa chinyorwa.
Kana iwe waisaziva, Silver Searcher (ag) yakafanana naAck. Ichi chirongwa chakagadzirirwa kuve 99% kutsiva kweiyo grep chishandiso. Nayo unogona kutsvaga mazita emafaira, mitsara yekodhi, kusefa kunoenderana nemaitiro, nezvimwe. Nokusingaperi, ack anodhinda pahwindo mitsara inoenderana izvo zvaida kutsvaga mushandisi. Ichi chishandiso, kusiyana ne grep, hachiuye chakatomisikidzwa mu distros, kana Silver Searcher, saka uchafanirwa kuzviisa wega.
Para gadza chishandiso ichi, iwe unogona kuzviita nyore kubva kumatura ewaunofarira distro, uchishandisa yakakodzera package package yako. Semuyenzaniso:
Nemirairo iyi unogona kuiisa mumadistros makuru, pamwe nekuparadzaniswa kweGNU / Linux kwakabva kwavari. Kamwe yaiswa, unogona kutanga nyore kushandisa iyo ag command. Nekuti mamwe mashoko nezve mabasa ayo, unogona kumhanya:
Para mamwe mashoko nezve chirongwa, unogona kubvunza yako GitHub peji. Ikoko iwe uchaonawo mienzaniso yekushandisa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Silver Searcher - Ack Imwe nzira yeKodhi Kutsvaga Chishandiso